Wallagga Naqamte Keessaa Oromoonni 2000 Ol Waraana EPRDFn Badii Tokkoon Malee Hidhamanii Jiru. | QEERROO
Wallagga Naqamte Keessaa Oromoonni 2000 Ol Waraana EPRDFn Badii Tokkoon Malee Hidhamanii Jiru.
Posted on August 24, 2019 by Qeerroo
By Kumsaa Buraayyu
Dhugaasaa Mangashaa Baloo jedhama. Abbaa-qabeenyaa fi jiraataa magaalaa Naqamteeti. Obbo Dhugaasaan humnoota Komaandi Postiitii magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee goolaa jiraniin erga qabamee hidhamee baatii sadii ta’uuf deema. Obbo Dhugaasaa qofa osoo hintaane yeroo ammaa kana Oromotni hedduun magalaa Naqamtee fi naannoo ishee jiraatan hidhaa keessatti gidirfamaa jiraachuun isaanii ifaadha.
Odeeffannoon naannoo sanaa maddu akka ibsutti, obbo Dhugaasaa fi namootni 200 ol tahan yeroo ammaa kana Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii jiru. Lakkoobsi hidhamtoota magaalaa sana waliigalaa ammo 2000 ol akka ta’e odeeffannoon kun dabalee ibsa. Bakki namootni itti hidhamaan hundi adda ba’e waan hinbeekamneef lakkoobsa namoota hidhaa jiranii sirritti adda baafachuun nama dhiba.
Obbo Dhugaasaa fi namootni 200 tahan lafa-jala (basement) Masaraa Kumsaa Morodaa, bakka duraan buufata mi’aa (store) turee fi as dhiheenya kana ammoo horiin itti galaa turan keessatti wal irratti waan hidhamaniif dhukkuba adda – addaaf saaxilamaa jiraachuun isaanii bal’inaan dubbatama.
Obbo Dhugaasaan yakka isa hiisisu kan raawwate tokko illee hinqabu. Yakki isaa Oromoo ta’uuf fi Oromummaa ofiin boonuu qofa. Obbo Dhugaasaan nama hojiitti amanuu fi dhaloota naamusa hojii jabaan kan yogguu qaru ta’uu isaaf ani ragaadha.
Waanti humnaa ol nama gaddisiisu guyyaa lama dura obboleettiin obbo Dhugaasaa dadhabdee jennaan obbo Dhugaasaan kadhaa namoota hedduun akka inni awwaala ishee irratti argamu erga taasisanii booda osoo inni imimmaan isaa harcaasuu deebisanii fudhatanii sokkan. Obboleettii isaaf boo’ee sirnaan awwallachuuf illee carraa dhorkatan. Kun gara-jabina faashitoonnii fi koloneeffattoonni agarsiisaa turan irraa addaan hinjiru. Obbo Dhugaasaan hidhamaa seeraa miti. Yakkii seeraan itti murtaa’e tokko illee hinjiru. Inni fi warri isa waliin jiran hidhamtoota siyaasaati. Kun seera-dhablummaa fi abbaa-irrummaa daangaa hinqabne kan humna weerartuu naannoo sana tu’ateen raawwatamaa jirudha. Balaaleffatamuu qaba.
Ummatni Oromoo mootummaa Itoophiyaa dhufaa darbaa jalatti hidhamaa ture. Yakkuma Nugusee Fantaa fi anga’oonni Wayyaanee naannoo kana irratti raawwachaa turan isaan ammaa kunis raawwachaa jiru. Inumaayyuu bal’innii fi miidhaan saba naannichaa irratti geggeeffamu ammaa kan caalaa dhufe fakkaata. Yeroo umaatni Oromoo wareegama ilmaan isaatiin gita-bittu Wayyaanee angoo irraa buuseera jedhee dhaadatu kanatti ilmaan Oromoo hidhaan gidirfamaa jiraachuun gadda qofa osoo hintaane abbaa beekuuf qaanii guddaadha.
Namootni obbo Dhugaasaa waliin hidhaa keessatti gidirfamaa jiran irra caalaa isaaniI beektota. Qeerroo fi Qarreen akkasumas Qonnaan-bultoota dabalata. Hedduun isaanii abbootii maatiiti. Kun nageenya, jireenyaa fi qabeenya sabicha irratti miidhaa guddaa geessisuudha. Sabas biyyas miidhuudha.
Mootummaan Dr Abiyyii ilmaan Oromoo Oromummaa qofaaf Komaandi Postiin mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran kanneen haal-duree tokko malee atattamaan gad dhiisisuu qaba. Oromoo keessaan ba’e jedhaa ilmaan Oromoo ilaalcha siyaasaa isaanii qofaan yakkanii hidhuun injifannoo waaraa fiduu hindanda’u. Dargiifis ta’e Wayyaaneef hinfidne. Mootummaa kanafi no for a jedhanii yaaduun gowwummaadha. Angoon dhugaan harka ummataa keessaan dhufti. Ummatni ammoo ilaalcha hundaa madaalee kan fedhe angoomsuuf mirga qaba. Shiraa fi dabas ija ittiin argu qaba. Yakka tokko malee bu’’aa siyaasaaf qofaaf jecha ilmaan isaa hidhuun ummaticha tuffachuu waliin wal gita.
Ummatatti baacuu dhiisaatii obbo Dhugaasaa fi hidhamtoota siyaasaa Godinoota Wallaggaa, Gujii, Bonaanaafi naannoolee Oromiyaa mara keessatti laamshessaa jirtan attattaman gad dhiisaa!
1 thought on “Wallagga Naqamte Keessaa Oromoonni 2000 Ol Waraana EPRDFn Badii Tokkoon Malee Hidhamanii Jiru.”
Qeerroo Buluqi on August 24, 2019 at 5:33 am said:
Hayyaa kana booda waliin hojjenna